Ụlọ ọrụ valvụ ọnụ ụzọ ámá ANSI 250LB na ndị na -ebubata ya Ọdịnihu
Valvụ ọnụ ụzọ ámá ANSI 250LB
Nhazi na nrụpụta: MSS SP-70 (SP-85 maka valvụ akụkụ ụwa)
Ihu na ihu: ANSI B16.10
Njedebe flanged: ANSI B16.1
Valvụ ọnụ ụzọ ámá ANSI & valvụ ụwa
Isi akụkụ na ihe
Aha akụkụ Ihe
Isi, ọkpọ Nkedo ígwè
Diski Nkedo ígwè + ọla kọpa/ọla/igwe anaghị agba nchara 2Cr13
Stem, mgbanaka oche Igwe anaghị agba/Brass
Nke gara aga: Valvụ ọnụ ụzọ ámá ANSI & valvụ ụwa
Valvụ ọnụ ụzọ ámá 125LB
Valvụ ụwa 125LB
Valvụ ọnụ ụzọ 250LB
250LB valvụ ụwa
Akuku Globe Valve
ụdị valvụ ụwa
ANSI Ọnụ Ụzọ Gatemá
valvụ ọnụ ụzọ klas125
valvụ klas ụwa 125
API Bellows Akara Globe Valve
API Globe Valve API Bellows Seal Globe Valve Njirimara nke valvụ ụwa akpọchiri Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na-ejikwa ahụ na ọkpụkpụ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa bụ akara mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite ka ejiri maka klaasị 150 na valvụ klaasị 300. Igwe anaghị agba nchara...
API adịgboroja Steel Globe valvụ
API Globe Valve API esorola nchara Globe Valve Njirimara valvụ ụwa akpọchiri Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na-ejikwa ahụ na ọkpụkpụ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa bụ akara mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite ka ejiri maka klaasị 150 na valvụ klaasị 300. Igwe anaghị agba nchara...
API Globe Valve Njirimara valvụ ụwa akpọchiri Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na-ejikwa ahụ na ọkpụkpụ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa bụ akara mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite ka ejiri maka klaasị 150 na valvụ klaasị 300. Igwe anaghị agba nchara+mgbanwe graphite merụrụ ga ...
API Globe Valve - Klas 150 & JIS 10 ...
API Globe Valve API Globe Valve - Klas 150 & JIS 10K Globe Valve Njirimara valvụ ụwa akpọchiri Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. Na ahụ na ọkpọ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa na-abụkarị ihe nrụpụta akara mgbachi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite na-eji maka klaasị 150 na Class3 ...
API Globe Valve - Klas 300 & JIS 20 ...
API Globe Valve API Globe Valve - Klas 300 & JIS 20K Valbe Valve Njirimara nke valvụ ụwa Bolted Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. Na ahụ na ọkpọ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa na-abụkarị ihe nrụpụta akara mgbachi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite na-eji maka klaasị 150 na Class3 ...
API Globe Valve - Klaasị 600 ruo Klas 1500 ...
API Globe Valve API Globe Valve - Klas 600 ruo Klas 1500 Globe Valve Njirimara valvụ ụwa akpọchiri Bonnet; N'èzí ịghasa na yoke; Isi na-ebili: Ebe obibi igwe nwere ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpọ nke valvụ ụwa Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. Na ahụ na ọkpọ nke klas 1500-Class2500 valvụ ụwa na-abụkarị ihe nrụpụta akara mgbachi mkpuchi mkpuchi mkpuchi Flange igwe anaghị agba nchara+ihe mkpuchi na-agbanwe agbanwe graphite na-eji maka klaasị 150 na Class3 ...
DIN Bellows Akara Globe Valve
DIN Bellows Seal Globe Valve Valve Size: DN 15 - DN 500 Nrụgide Nrụgide: PN 16 - PN 100
Ogo Valve Valve DIN Globe: DN 15 - DN 500 Nrụgide Nrụgide: PN 16 - PN 100
Valve Gate Valve, Ogwe bọọlụ Trunnion, Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Akuku Globe Valve, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Valve Gate Gate,